falcon - Synonyms of falcon | Antonyms of falcon | Definition of falcon | Example of falcon | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for falcon
Top 30 analogous words or synonyms for falcon
စပေ့အက်ခ်စ် ဒရာဂွန် စပေ့အက်ခ်စ် ဒရာဂွန် (SpaceX Dragon) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည့် စပေ့အက်ခ်စ် (SpaceX) အာကာသ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ တည်ဆောက်ထားသော အာကာသယာဉ် တစ်စင်းဖြစ်သည်။ စပေ့အက်ခ်စ် ဒရာဂွန်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖယ်လ်ကွန် ၉ (Falcon 9) ဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှ လွှတ်တင်သော ပထမဆုံး အာကာသယာဉ် ဖြစ်သည်။
Asus ASUSTeK Computer Incorporated (တရုတ် - 華碩電腦股份有限公司) (တရုတ်အသံထွက် - ဟွာဆော့) သည် ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံစုံ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများမှာ မားသားဘုတ်၊ လက်ပ်တော့ပ်၊ ဆာဗာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများ ပါဝင်သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီသည် အခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Apple Inc., Dell, Falcon Northwest နှင့် Hewlett-Packard တို့အတွက် ကွန်ပျူတာ အတွင်းပိုင်း ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၂၀၁၄ စစ်တမ်းအရ Asus သည် ငါးခုမြောက် အကြီးမားဆုံး PC ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ Some other recent launch vehicles haveasmall fraction of the Saturn V's payload capacity: the European Ariane5with the newest versions Ariane5ECA delivers up to 10,000 kg to geostationary transfer orbit (GTO). The US Delta4Heavy, which launchedadummy satellite on December 21, 2004, hasacapacity of 13,100 kg to geosynchronous transfer orbit. The yet to be flown Atlas V Heavy (using engines based onaRussian design) delivers up to 29,400 kg to LEO and 8,900 kg to GTO. The yet to be flown SpaceX Falcon Heavy delivers up to 53,000 kg to LEO and 12,000 kg to GTO.